နှစ်သစ်ကူးအိမ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာနာမည်ကြီးကော့တေးတွေဟာခေတ်မှီပြီးအေးမြတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားကျော်ကြားသောအချိုရည် ၄ မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ သငျသညျ chimes မတိုင်မီ4မိနစ်စာသားသူတို့ကိုချက်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ် - ...
လက်ဖက်ရည်ဆိုတာဘာလဲ ငါတို့အများစုသည်ဤမေးခွန်း၏အဖြေကိုကောင်းစွာသိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်း၊ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်! ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်နံနက်စာတွင်ကော်ဖီသောက်ကြသည်သာမကလက်ဖက်ရည်သောက်သူများလည်းပါသည်။
ဖုတ်ထားသောနို့သည်အဘယ်ကြောင့်အသုံးဝင်သနည်း။ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။ မုန့်ဖုတ်ထားသောနို့သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ထူးခြားသည်၊ ၎င်းတွင်အလားတူဓာတ်များမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့သောနို့တွင်အသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းပေါင်းတစ်ရာကျော်ပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုအနည်းငယ်သောအစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အချဉ်ကော့တေးဘယ်လိုလုပ်မလဲ များသောအားဖြင့်ကော့တေး၏ထုပ်ပိုးမှုတွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ကြားချက်များ) ကောက်ရိုးဖောင်းခြင်းနှင့်နေရောင်ကို ဖြတ်၍ ပူဖောင်းသည်အောက်စီဂျင်ဆလင်ဒါမရှိပဲလမ်းဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ငါကလေးဘဝတုန်းကဒီဟာကိုစားခဲ့တယ်။
အိမ်လုပ်သောဝိုင်ဘူးတစ်ဘူး၌အပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ရန်လိုသလော။ ငါမပြောနိုင်ဘူးတဲ့လက်အိတ်နဲ့ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှမ။ သို့သော်ဝိုင်ပြုလုပ်သည့်စည်းကမ်းများအရသူတို့သည်ဓာတ်ငွေ့ထွက်စေသည်။ (ရေတံဆိပ်) အားလုံး ...
ပိုးကင်းနေသောနို့၏သက်တမ်းသည်အဘယ်နည်း၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျေးဇူးပြုပြီး Pasteurized အကြောင်းကိုရေးပါ Pasteurized နို့သည်အပူချိန် ၇၀ မှ ၇၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ Pasteur ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့် microflora ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအပြောင်းအလဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
Arabica ကဘာလဲ? အခြားကော်ဖီအမျိုးအစားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ Mocha! Arabica သည် Ethiopia နှင့် Robusta (Congolese ကော်ဖီ) တို့၏ဇာတိမျိုးဖြစ်သည်။ အခြားကော်ဖီပင်များ၊ များများစားစားရှိသောကြောင့်စားသုံးနိုင်သောအစေ့များမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။ အမျိုးအစားများ ...
အားကောင်းသော7နှင့်အထက်မြင့်မားသောအားကောင်းသောမှောင်မိုက်ဘီယာအမှောင်ဘီယာသည်အရောင်အားဖြင့်ဘီယာအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းကိုရုရှားနိုင်ငံနှင့်စပိန်နိုင်ငံရှိအခြားဥရောပနိုင်ငံများ၌ပျံ့နှံ့သွားသည်။
အေးခဲနေသောချယ်ရီသီးများမှ KISEL ကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း။ ???? သစ်သီးများကိုရေဖြင့်သွန်းလောင်းပါ၊ သကြားထည့်ပါ၊ ဓာတ်ပါသောဓာတ်သည် ၁ လီတာအဘို့ - ရေခဲသို့မဟုတ်သေးငယ်သောပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်မပြည့်စုံသောဇွန်းဇွန်းကိုဖျော်ပါ။
အိမ်မှာလင်မနစ်လုပ်နည်း လီမွန် ၂ လုံး (လတ်ဆတ်သောအရည်ရွှမ်းသော)၊ ရေတစ်လီတာလီတာ၊ သကြားခြောက်ဇွန်းနှင့်ပူစီနံအရွက်များ။ ကျနော်တို့သံပုရာတစ်ဝက်စီကိုဖြတ်ပြီးလီမွန်တွေကိုဆေးကြောတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာရှိတဲ့ဗော့ခဲအေးခဲပါသလား။ ကောင်းလျှင် - ၂၈.၇ စင်တီဂရိတ်မှအောက်တွင်ရှိသော်လည်းလက်တွေ့တွင်တန်ဖိုးကွာခြားသည်မှာ ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လွန်းသည် -28,7 အောက်ရှိခဲသည်။ Checked ။ Palnaya - မှ ...
ဝိုင်များရောနှောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟုခေါ်သည် - ... ဝိုင်များကိုရောနှော။ မရသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်မဖြစ်မနေကိုဝိုင်ဟုခေါ်။ မရသောထိုဖျော်ရည်များနှင့်ရောစပ်သည်။
ကဖိန်းဓာတ်ပါသောကော်ဖီကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ ဒါကရာဘာအမျိုးသမီးလိုပါပဲ ကော်ဖီဖျော်ထားတဲ့ကော်ဖီပါ၊ ဖိအားတွေခုန်တဲ့အခါနွေရာသီမှာငါသောက်တယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်လို့မပြောနိုင်ပေမယ့်လက်ဖက်ရည်က ...
ကောင်းသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဝီစကီ ... ?
ကောင်းသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဝီစကီ ... ? ကောင်းမွန်သောလထက်ကောင်းသည်။ ငါကြိုက်တယ်: 1) ။ အနီရောင် Label2) ။5label ဒီဝီစကီတွေဟာအရသာရှိပြီးနူးညံ့ပြီးတစ်ထောင်အထိ stacked နိုင်ပါတယ်။ မြင်းဖြူယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းသောဝီစကီ - စျေးကြီးသောဝီစကီပိုကောင်းသောဝီစကီ ...
ဝိုင်ကိုမြည်းစမ်းတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဘာလဲ? ဝိုင်တာတာတာ zzzz zzzz zzz zzz အဆိုပါတာတာသည်ထုတ်ကုန်ကိုမြည်းရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲဝေဖန်မှုနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အကဲဖြတ်မှုကိုပေးသည်။ ရှေးခေတ်ရောမမြို့မှာတောင်မှသူတို့က ...
ကြက်ဥ, 2-3 Tsp ။ သကြား, 1 Tsp ။ ထောပတ်, 1 Tsp ။ ကိုကိုးအမှုန့်။ အရာအားလုံးကိုတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ သင်သည်သံပုရာဖျော်ရည်အနည်းငယ်ကိုထည့်နိုင်သည်။ ကြက်ဥ ...
အိမ်တွင် Grog ကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း။ ATP Grog ကော်ဖီချက်ပြုတ်သူ ၆-၈ ယောက်အတွက် - ရမ် ၀.၅ လီ၊ cognac ၁၀၀ မီလီ၊ သကြားရည် ၅၀ မီလီမီတာ၊ ကော်ဖီပြုတ်ရည် ၅၀၀ မီလီမီတာ၊ သံပုရာ။ ပူ (သို့သော် ...
Scotch ဝီစကီကဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲ။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုကဘာလဲ Moonshine !!! Plus အားအဖွားရဲ့စည် !!!! တကယ်တော့ moonshine သည်ထင်းရှူးပင်ပေါ်မှအခွံခွာပြီးဝီစကီစည်များတွင်အသက်ကြီးသည်။
ဆိပ်ကမ်း 777! ဒီဟာကိုသောက်ရကျိုးနပ်တယ်လို့မင်းထင်လား။ အဘယ်သူသောက်သည်၊ အဘယ်သို့သောအာရုံနှင့်ရေးထားသည်ကိုရေးကြပါလော့။ ဤသောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မော်ကွန်းကိုလည်းရေးသားနိုင်သည်။ ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်
ဘီယာနှင့်ဘီယာသောက်သုံးမှုအကြားခြားနားချက်များမှာအဘယ်နည်း။ ဘီယာသောက်ခြင်းဟူသောဝေါဟာရသည်ရုရှား၌သာတည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဘီယာနှင့်အချိုရည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်နည်းပညာစည်းမျဉ်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
55 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,759 စက္ကန့်ကျော် Generate ။